Ungayibuka Kanjani iDisney Plus KuRoku? - Ezokuzijabulisa
URoku uyiphayona ekuhlinzekeni ibhokisi elihlangene lokusetha ukuvula i-TV yakho ejwayelekile ibe yi-smart TV. Uthola ukufinyelela kokunezinhlobonhlobo kwezinhlelo zokusebenza nezinye izici eziningi. Ungaze usho ukuthi ukukhuthazwa kwe-Amazon Fire Stick, i-Apple TV, namanye amadivayisi afanayo.
IDisney + iku-inthanethi isevisi yokusakaza olunikezwe yiDisney ukuze abantu benze Sakaza imibukiso yabo ye-TV namabhayisikobho . Kubandakanya ukuqoqwa okuphoqayo okwangempela kanye nokuqukethwe okubanzi. Uma ubhalisela i-Disney +, uthola ulwazi olungenazo izikhangiso ngokuqukethwe kwe-premium nokunye okuningi.
Ngabe iDisney Plus iyatholakala kuRoku? Ungayifinyelela kusuka kunoma iyiphi ingxenye yezwe? Ungabhalisa kanjani? Udinga i-VPN? Lo mbhalo ukuletha impendulo kuyo yonke le mibuzo. Ngaphezu kwalokho, sihlanganisa cishe yonke into njengokufundwa okusheshayo kukho konke odinga ukukwazi ngeDisney Plus kuRoku.
Ungayithola Kanjani iDisney + yeRoku?
IDisney + inokuhambisana kwendawo yonke kwezinhlelo eziningi ezisebenza njenge-Android, iWindows, i-Apple, neMac. Ungayithola nge isiphequluli sewebhu . Uma unedivayisi, iyahambisana nawo wonke amapulatifomu ahlakaniphile njengama-smartphone, ama-iPod, amaphilisi, nokunye okuningi.
Ngaphezu kwalokho, iyahambisana namabhokisi wokusetha nama-TV ahlakaniphile. Ngakho-ke, uthola ukufinyelela ku-Roku. IDisney + iyahambisana namadivayisi ahlukahlukene e-Roku, kufaka phakathi i-TV, izinti zokusakaza , I-Ultra LT, uNdunankulu, ne-Express. Kodwa-ke, kungcono uqinisekise ukuthi unesoftware entsha futhi evuselelwe ngaphambi kokuzama ukufaka i-Disney Plus.
Nasi umhlahlandlela wesinyathelo ngesinyathelo wokuthola iDisney + kuRoku:
Vakashela ekhaya ngokuchofoza inkinobho yasekhaya kudivayisi yakho ye-Roku.
Skrolela futhi uthole 'iziteshi zokusakaza' bese uchofoza kuso.
Lapho uzothola inketho yokucinga iziteshi.
Uma usuyitholile, chofoza kuyo ukuyengeza. Inqubo yokufaka izolandela.
Kwesinye isikhathi, idivayisi yeRoku ingahle icele ukuqinisekiswa kwephini. Sicela usinikeze.
Uma usufakiwe, buyela ekhaya bese uthola i-Disney +.
Qala i-Disney + yakho futhi uma ubhalisile, ngena ngemvume.
Uma ungekho obhalisile, qala isilingo sakho samahhala.
Njengoba ubhalisela isivivinyo samahhala, kuzokucela iphakethe ongakhetha kulo.
Lokhu kuzoba yilokho ozokukhokhiswa ngemuva kokuphela kwesivivinyo.
Lapho usuqede inqubo, uzokwazi ukufinyelela kokuqukethwe kweDisney +.
Yimaphi Amadivayisi we-Roku Angasekeli iDisney +?
I-Disney Plus ayisekeli amadivayisi we-Roku amadala. Uhlu lubandakanya izinti zokusakaza ezingama-3420X, ama-LT Models we-2450X, i-Roku 2 HD 3050X, i-Roku 2 XS 3100X, i-Roku HD 2500X. Noma iyiphi inguqulo noma idivayisi engezansi kwalokhu ayihambisani, futhi. Kungenxa yokushoda kwezibuyekezo zesoftware nezinye izingqinamba ezifanayo.
Ungazikhipha ohlwini lweDisney Plus?
Yebo, ungabhalisa ku-Disney Plus. Kunezindlela ezimbili zokukwenza.
Okokuqala, hlola uhlelo lokusebenza lweDisney + ngokusebenzisa lezi zinyathelo ezilandelayo:
Vula i-Disney Plus kusiphequluli sewebhu noma i-Roku
Iya kumaphrofayela akho
Thola i-'Akhawunti 'bese uchofoza kuyo
Lapho uzothola isigaba 'sokubhaliselwe kwakho'
Lapho, uzothola i- khansela okubhaliselwe inketho. Qalisa.
Uma ubhalise ku-Disney + ngesitolo sesiteshi sikaRoku, kungahle kungakukhombisi inketho enikezwe ngenhla. URoku uthathwa njengomhlinzeki wesevisi ovela eceleni. Asikho isidingo sokukhathazeka! Nazi izinyathelo okufanele uzilandele:
Vakashela Iwebhusayithi yeRokukusiphequluli sakho sewebhu ngo- Ukuchofoza Lapha .
Ngena ngemvume ku-akhawunti yeRoku enesiteshi seDisney +.
Lapho uzothola inketho ethi 'Phatha okubhalisile'.
Ngaphakathi kokukhetha, uzobona i-Disney plus.
Kufanele kube nenketho yokukhansela yokubhalisa eceleni kwayo. Uma kungenjalo, chofoza kuDisney + ukubona ukuthi kuveza yini inketho.
Chofoza kunketho yokukhansela yokubhalisa bese uqinisekisa.
IDisney + yakho izosuswa ukusebenza.
Khumbula, uma uzikhipha ohlwini ekuqaleni komjikelezo wakho wokukhokha, usuvele ukhokhele. Ngemuva kokuzikhipha ohlwini, iDisney plus izotholakala kuze kube umjikelezo olandelayo wokukhokha. Uma uvuliwe Isivivinyo seDisney + , qiniseka ukuzikhipha ohlwini ngaphambi kokuphela kwesivivinyo, noma uzobhekana nezinguquko. Ayikho inqubomgomo yokubuyiselwa kwemali kulezi zici.
Ngabe i-Disney + Inikezani?
Lapho usubhalisele i-Disney Plus (noma isilingo), uthola ukufinyelela kuzinsizakalo ezingezelelweyo. Unokufinyelela okuphelele kokukhishwa okusha nokwakudala okuvela ku-Disney. Inikela ngokuqukethwe okuvela kuMarvel Cinematic Universe, Star Wars, Pstrong Studios, nakuNational Geographic network. Ngakho-ke, une-wide iqoqo lezintandokazi ze-TV, ama-movie, nokuqukethwe koqobo ukufinyelela ‘okufunwayo.
Uma uvakashela isitolo seziteshi esisemthethweni seRoku, uzobona ukuthi ithi isekela ukusakazwa kwezikrini ezine ngasikhathi sinye. Leyo inketho ebiza kakhulu kunoma yimuphi umhlinzeki wesevisi yokusakaza owake wanikeza. Kungakhawulelwa kumadivayisi we-Roku, kepha kufanelekile ukucatshangelwa.
Ngaphezu kwalokho, uthola ukulandwa okungenamkhawulo kwamadivayisi angafika kwangu-10 nganoma yisiphi isikhathi. Uma ubheka lezi zici, kuyinani eliphakeme lemali.IDisney + nayo isebenza ngokungaguquguquki ekuhlinzekeni okuqukethwe okungcono kakhulu kwe-4K UHD. Yize ukutholakala kukhawulelwe, ungalindela ukuthi umtapo wezincwadi uzokwanda ngokuzayo.
Ungangena Yini kuDisney + Ngaphandle kwe-USA?
Njengamanje, iDisney plus iyatholakala kuRoku ngaphakathi e-USA. Uma ufuna ukuyifinyelela kusuka kwelinye izwe noma isifunda, kuzofanele usebenzise i-VPN . I-Roku uqobo itholakala kuphela e-USA, UK nase Canada. Qiniseka ukuthi usebenzisa i- I-VPN iyahambisana neRoku . Uzothola ama-VPN amaningi we-premium ngokuhambisana. Lapho wenza kusebenze i-VPN, xhuma kuseva eseMelika, futhi uzothola ukufinyelela okuphelele kuDisney +. Usazodinga okubhaliselwe njengoba iDisney + ingatholakali ekusakazweni kwamahhala e-US.
Manje ungajabulela iDisney plus cishe kunoma iyiphi idivayisi yeRoku. Kukulethela ukungcebeleka kokubuka okuqukethwe kwakho kwe-Disney okuthandayo nomndeni nabangane, ikakhulukazi ku-TV. Konke okudingayo ukubhalisa, futhi ulungele ukuhamba. Ungahlola futhi ezinye izinyanda zeDisney + ezitholakala emakethe ngephakeji yokulondoloza inani nokunikezwayo.
Lungisa i-Disney Plus Error Code 83